Body Bulding – « Big Mada 2019 »: nanao pao-droa Ramahavonjy Arnaud Hubert | NewsMada
Body Bulding – « Big Mada 2019 »: nanao pao-droa Ramahavonjy Arnaud Hubert
Par Taratra sur 14/05/2019
Tontosa, ny faran’ny herinandro teo tany Toamasina, ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, taranja bodybulding. Nanjakan’ny avy eto amin’ny ligin’Analamanga ny fifaninanana ka nahazoany anaram-boninahitra telo. Anisan’izany ny eo amin’ny « men’s physique », norombahan’i Léonce Anicet avy eto Analamanga, mbola avy eto amin’ity ligy ity harany ny voafidy ho « miss bikini » tamin’ny alalan-dRabakoarisoa Hoby raha Ramahavonjy Arnaud Hubert, mbola avy eto amin’ny ligin’Analamanga, ny nandrombaka ny « super coupe » teo amin’ny bodybulding, izy izay efa voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara, teo amin’ny sokajy 70 ka hatramin’ny 80 kilao. “Efa tompondaka ho an’ny sokajy latsaky ny 70 kilao aho tany Mahajanga, niezaka nampiakatra sokajin-danja tamin’ity, ka nandrombaka anaram-boninahitra roa be izao”, hoy i Arnaud, nanambara fa tsy mora ny mitazona anaram-boninahitra sy mahazo izany. Tsy maintsy misy ny fanomanana, izay in-6 isan-kerinandro ny manao fanazarantena.
Ankilany, naneho ny hafaliany amin’ny nandrombahana ny anaram-boninahitra “miss bikini” Rabakoarisoa Hoby, nanambara fa tsy mbola mety mino hoe tompondakan’i Madagasikara, toy ny vehivavy rehetra. “Somary natahotra ihany koa aho tamin’ny voalohany raha vao hanao ity taranja ity, sao hoe lasa bokona hozatra toy ny lehilahy, saingy rehefa hainao ny mankafy izany, mandeha ho azy ary mahagaga fa lasa mahafinaritra ny manao izany”, hoy ny fanazavany. Nahatsiaro ho afa-po tamin’iny andiany notanterahina tany Toamasina iny kosa i Vernier Georges, filoha mpitantana ny taranja bodybulding. Miakatra hatrany ny haavo teknika, hoy izy, etsy ankilany, mavitrika ihany koa ny mpandray anjara. Sambany rahateo nisy atleta avy any Toliara nahatonga solontena, ary tafiditra fahatelo avy hatrany tamin’ity.
Eo amin’ity taranja ity hatrany, nanamafy ny mpitantana fa mbola maro ireo hetsika miandry antsika ato ho ato, toy ny « Body Perfect » sy ilay fifaninanana atsy La Réunion ary ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, hotanterahina any Séoul, ny faran’ny volana novambra any ho any. Kasaina handray anjara amin’izany ireo anatin’ny ekipam-pirenena, miampy ireo atleta vao nisandratra, raha ny fanazavana hatrany. “Inoana ny hahazoana vokatra tsara ho an’ireo atleta ireo ary ny handehanana lavidavitra kokoa”, hoy ny filohan’ny federasiona ny FMHMC (Fédération malgache d’haltérophilies, de musculaton et de culturisme), Randriamanarivo Harinelina, nanaraka akaiky ity fifaninanana ity.